မေး poetha1988@gmail.comးအကူအညီ တစ်ခုလောက်တောင်း ချင်ပါတယ်...ကျွန်တော့ကွန်ပြူတာမှာ Driver လိုနေလို့လေ.. အကိုအားရင် တစ်ချက်လောက် ကူညီပါလားအကိုရာ ကျွန်တော့် ကူပြူတာအမျိုးအစား က. Toshiba Satellite pro C 640 ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒါ တစ်ချက်လောက် အားရင်ရှာပေးပါနော်..
ညီလေးရေ ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ကြိုပြောထားလိုက် ပါ့မယ်။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ 32 bit အတွက်ကော 64 အတွက်ပါ Download လုပ်ထားပါ။ Driver က တကယ်လိုအပ်လာရင် ရှာဖို့ တော်တော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ Download Toshiba Satellite C640 Drivers For Window764 bit
Download Category Size Download Toshiba Driver |Display|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): AMD Display Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q*) 138.16 MB Download Toshiba Driver |Display|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Intel Display Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 28.86 MB Download Toshiba Driver | Display|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Intel Display Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 28.86 MB Download Toshiba Driver |Display | Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): NVIDIA Display Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 160.82 MB Download Toshiba Driver |Ethernet LAN |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Atheros LAN Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 6.82 MB Download Toshiba Driver |Ethernet LAN | Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Atheros LAN Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 6.84 MB Download Toshiba Driver |Wireless LAN |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Atheros Wireless LAN Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 24.77 MB Download Toshiba Driver |Wireless LAN |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Realtek Wireless LAN Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 21.31MB Download Toshiba Driver |Wireless LAN |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Atheros Wireless LAN Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 26.55MB Download Toshiba Driver |Wireless LAN| Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Realtek Wireless LAN Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 21.59MB Download Category Size Download Toshiba Driver |Sound |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Conexant Audio Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 48.56 MB Download Toshiba Driver |Sound |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Conexant Audio Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 47.11 MB Download Toshiba Driver |Sound |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): NVIDIA HD Audio Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 6.45 MB Download Toshiba Driver |Pointing Devices |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Synaptics Touchpad Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 31.15 MB Download Toshiba Driver |Pointing Devices |Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Synaptics Touchpad Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 31.13 MB Download Toshiba Driver |Utilities| Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Atheros Bluetooth Filter Driver Package (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 60.74 MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): ConfigFree (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 60.29 MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Intel Chipset SW Installation Utility (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 4.6 MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Intel Management Engine Interface (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 8.17MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Intel Rapid Storage Technology Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 12.12MB Download Category Size Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): Realtek Card Reader Driver (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 11.18MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): TOSHIBA HDD/SSD Alert (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 37MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (32bit): TOSHIBA Web Camera Application (For PSC2P* ; PSC2R* ; PSC2Q) 28.79MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Atheros Bluetooth Filter Driver Package (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 60.79MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Intel Chipset SW Installation Utility (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 5.27MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Intel Management Engine Interface (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 7.87MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): Realtek Card Reader Driver (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 11.16MB Download Toshiba Driver |Utilities|Satellite / Satellite Pro C640 Win7 (64bit): TOSHIBA Audio Enhancement (for PSC2S*, PSC2U*, PSC2V*, PSC2X*, PSC2Y*, PSC2Z*) 5.13MB Download Toshiba Satellite C640 Drivers For Window764 bit
မေး Shane lay : အကိုရေ.............ကျွှန်တော်ရဲ့ lenovo G475 ရဲ့ window7Driver တွေလိုချင်လို့ပါ အကိုရာ ....... အကိုပြီးတော့ ..... ဟဲ ဟဲ Window 8 Genuis ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာလေးပါ သိချင်လိုက်တာ အကို၇ာနော်..
Version: 8.54.4.50Windows732bit
Windows764bit22 Nov 2011
Version: 8.54.4.50Windows XP22 Nov 2011
Version: 21Windows XP
Windows764bit03 Jun 2011
Version: 6.4.0.1601Windows732bit
Windows764bit23 Sep 2011
Version: 5.6.0.6800/1.0.25.0Windows XP12 Oct 2011
Version: 1.0.13.0Windows732bit02 Jun 2011
Version: 1.0.13.0Windows764bit02 Jun 2011
Version: 1.10.1004.1/13.10.1020.1/5.8.56000.8Windows732bit
Version: 1.10.1209.1/13.11.616.1/1.1.1.7Windows XP12 Oct 2011
Version: 6.1.7600.10003Windows732bit
Version: 6.1.7600.10003Windows XP12 Oct 2011
Version: 1.0.0.39Windows732bit
Windows764bit02 Feb 2012
Version: 1.0.0.43Windows XP12 Oct 2011
Version: 9.2.0.115/3.1.50.0/5.100.82.15Windows732bit
Version: 9.2.0.25/3.1.50.0/5.100.82.15Windows XP12 Oct 2011
Version: 6.0.1.5Windows732bit
Windows764bit28 Feb 2011
Version: 3.0.4.2Windows XP12 Oct 2011
Version: 6.0.2282.0Windows732bit
Version: 1.0.1.38Windows732bit
Version: 7.0.1628Windows732bit28 Feb 2011
Version: 7.0.1628Windows764bit28 Feb 2011
Version: V1.0Windows732bit
Version: 10.0.570Windows732bit
Version: 5.1.1.24Windows732bit
Version: 4.0.0.1206Windows732bit
Version: 3.1.3603Windows732bit
Version: 3.2.1540.75Windows XP12 Oct 2011
Version: 1.2.1.210Windows732bit
Version: 8.0.4.3/15.1.12.0Windows732bit
Version: 8.0.4.3/15.1.12.0Windows XP12 Oct 2011
Version: 8.862.6.5Windows732bit
Windows764bit28 Jan 2012
Version: 8.862.6.3Windows XP12 Oct 2011
Firefox 12.0 ရဲ့အထက် firefox version များမှာ ဇော်ဂျီဖြင့်ရေးထားသည့် မြန်မာစာ လက်ကွက်များကို Chat box ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Header နာမည်ဖြစ်ဖြစ် လေးထောင့်တုံးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အခုနောက်ထွက်မည့် version များသည့် window 8 အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး version မြှင့်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်မပြေ ဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော် အဆင်ပြေအောင် ဆက်ရေးပေးပါ့မယ်။ တကယ်လို့ လုံးဝ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းမှာ Firefox 12.0 ကို တင်ထားပေးပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အဆင်မပြေတဲ့ version အမြင့်ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး 12.0 ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ firefox setting ထဲက auto update ကို ခဏပိတ်ထားပေါ့ ... ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်တာများကိုပါ တင်ပေးမည် ဖြစ်သဖြင့် အားလုံးလဲ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် WINDOW Operating အပြင် MAC O/S | LINUX O/S ကိုပါ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ စသုံးလာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် MAC နှင့် LINUX နှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သော software များ၊ စာအုပ်များ၊ Tutorial များနှင့် အကြောင်းအရာများကိုပါ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေနှင့် ကွန်ပျူတာကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း update လုပ်ပေးမည့် software များ
Internet Download manager (ဆိုက်ညာဖက်ခြမ်းတွင်ရှိ)
Kaspersky Keys များ (၀ဘ်ဆိုက် ညာဖက်ခြမ်းတွင်ရှိ)
Ultrasurf software (ဆိုက်ညာဖက်ခြမ်းတွင်ရှိ)
443 Port ဖြင့် Proxy များ (ဆိုက်ညာဖက်ခြမ်းတွင်ရှိ)
ဒီ Bigasoft Total Video converter က ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ converter တွေ တော်တော်များများ Download လုပ်မရတော့ အသစ်တွေ စုံအောင်လို့ ထပ်တင်ပေးပြီး အရင်က Download လုပ်မရတဲ့ ပို့စ် အဟောင်းတွေကို ဖျက်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မေးထား တာတွေ ကိုလည်း တင်ပေးပါ့မယ်။ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ ၀ဘ်ဆိုက်ဖက်ကို မလှည့်ဖြစ် လိုက်တဲ့ အတွက် မေးထားတာတွေကို ချက်ချင်းမဖြေပေး လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ converter ကတော့ AVI, Xvid, DivX, H.264, MP4, 3GP, MKV, WMV, RM, FLV, MOV, WTV, MXF, MVI, F4V စသည့် format များအပြင် Apple ProRes MOV, WebM, VP8, 720p, 1080p, 1080i HD, AVCHD စသည့် videos types များစွာကို convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ထွက်နေတဲ့ format များ ထပ်ပိုပါလာတာကတော့ ကြေနပ်စရာပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုလုပ်ချင်တဲ့ format အမျိုးအစားကို convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ converter အမျိုးအစားတွေကို လိုက်လိုက်ရှာရတာ တစ်ခါတစ်လေ မလွယ်ပါဘူး။ လိုချင်တဲ့သူများ Download လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ Mediafire | Minus | Filecloud
Data တွေနှင့် ဖိုင်တွေကို Backup ပြန်ယူဖို့အတွက် format အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ထားတဲ့ harddisk နှင့် storage device ကိုတောင်မှ ပြန်ယူပေးနိုင် ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးမှ ပို့စ်တင်လိုက်တာပါ။ ဟုတ်/မဟုတ်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုသာ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အားလုံးပဲ ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဖိုင်များအား ပြန်လည် ဆည်ယူနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်။ လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ Mediafire | Filecloud | Minus Read More
အမျိုးမျိုးသော စာစီစာရိုက် program တွေကနေ pdf စာအုပ်အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download link ပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်သေးသေးလေးပါပဲ။ Mediafire | Minus | Filecloud
ဒါကတော့ EPUB ကနေ pdf ကို ပြန်ပြောင်းချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းပညာ စာအုပ်တော်တော်များများကို ဖုန်းထဲကနေ ဖတ်ချင်တဲ့သူများအတွက် အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက လူတိုင်းဖုန်းမကိုင်နိုင်ပေမယ့် အခုတော့ ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့မို့လို့ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ တင်ဖြစ်သွားတာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ကြပါ။
pdf ကနေ Epub ကို ပြောင်းတဲ့ software ပါ။ တောင်းဆိုထားတဲ့သူ ရှိလို့ပါ။ တော်တော်များများ ဖုန်းတွေဟာ pdf ကို မဖတ်နိုင်ပေမယ့် Epub လုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ကိုတော့ ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ဖုန်းထဲကနေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ xml format နဲ့လုပ်ထားတဲ့ စာတွေကိုလည်း Epub စာအုပ်အဖြစ် ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်။ အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ကြပါ။ password ကတော့ ကျွန်တော့် အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။
Password ထည့်ရခြင်းနှင့် Download ဖိုင်နာမည်အား နာမည်မှန်မပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
ကဲ ဒီကိစ္စကိုပြောရအောင်ဗျာ. ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ပြောတယ်. ပို့စ်ကိုလည်း ထိပ်ဆုံးမှာ တင်ထားပေးတယ်. Download လုပ်မည့်သူများ မဖြစ်မနေဖတ်ပေးပါ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို မမြင်ကြတာကတော့ ကျွန်တော်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဖက်က အဲ့လို password မခံဘဲ (သို့) software နာမည်နှင့် version ကိုသာ ထည့်ထည့်ပြီး တင်နေရင် အခု mediafire account နှင့်တင်ထားသမျှ ဖိုင်များကို ဖျက်ပစ်ယုံတင်မကဘူး။ အကောင့်ကိုပါ ပိတ်ပစ်တဲ့အထိ ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်လာဦးမှာပါ။ အဲ့လို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြိုသိလို့ ပို့စ်တင်ပါတယ်။ ဒါကို ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောတဲ့သူကပြော၊ အခုဆိုရင် အထာကိုင်တယ် လို့ဆိုတဲ့သူကဆိုနဲ့ အမျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော့် မေးလ်လိပ်စာဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ password ပါပဲ။ လျှို့ဝှက်နံပါတ် တောင်းသမျှကို >>>>> konyinaymin@gmail.com <<<<<<ရှာတဲ့သူက ရှာပေးပြီး virus ဟုတ်မဟုတ် သေချာစစ်ပြီးမှ အပင်ပန်းခံ တင်ပေးတာတောင်မှ ဒီ password လေး ရိုက်ထည့်ဖို့တောင်မှ ၀န်လေးနေရင်လည်း မဒေါင်းတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါကျွန်တော် ပြတ်ပြတ်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်တင်တဲ့ဖိုင် အဖျက်မခံရအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ cover လုပ်ကြည့်မှာပါပဲ။ လိုချင်တာပဲ သိလို့မရပါဘူး။ အဲ့ဆိုက်မှာ ဘာတွေ ပြုပြင်ထားသလဲ။ လက်ရှိလက်တလောအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ နည်းနည်းပါးပါး တီးခေါင်းကြည့်ပါဦး။ www.mediafire.com ဘာတွေပြောင်းလဲနေပြီလဲ။ ဘာလို့ တင်ထားသမျှ လင့်တွေ(တစ်ခြားသူတွေတင်ထားသမျှတွေပါ အပါအ၀င်) အဖျက်ခံရတာတွေဟာ ဘာလို့လဲ။ သူ့ဆိုက်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဘာတွေ ထပ်တိုးထားသလဲ။ www.ifile.it ကကော ဘာဖြစ်လို့ အဲ့နာမည်မရှိတော့တာလဲ။ အဲ့နာမည်အစား နောက်ထပ် နာမည်အသစ်တစ်ခု ကိုထပ်ဝယ်ပြီးတော့ free user များတင်ထားတာတွေ မှန်သမျှကို ဖျက်ပစ်ပြီးတော့ premium member တွေ တင်ထားတာတွေကိုသာ backup ပြန်ပြီးတော့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဒုက္ခတွေကို သိပါသလား။ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲကော လိုက်ဖတ်ကြည့်ဖူးလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးပေးပါ။ ကျွန်တော့်ကိုချည်းအပစ်တင်နေမယ့်အစား အင်တာနက်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲနေသလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သွားဖတ်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ စကားပြောတာ နည်းနည်းရိုင်းသလို ဖြစ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ တစ်ခုတည်းပဲပြောချင်ပါတယ်။ ၃ နှစ်တိုင်တိုင် တင်ပေးထားတဲ့ mediafire account နဲ့ ifile account နှစ်ခုစလုံး အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် အဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့အတွက် အားလုံးကို ပြန်တင်ပေးရမယ့် အခြေအနေအထိ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်းစားထားပါတယ်။ version အဟောင်းတွေကို ပြန်ပြီး link တွေပြင်နေမယ့်အစား version အသစ်တွေကို တင်ပေးသွားဖို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ ကိုတင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို တတ်နိုင်ရင် premium account နဲ့ တင်ဖို့အထိကို ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဖက်က လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်ထင်ရင် လုပ်ပေးသွားမှာပါပဲ။ ပြောင်းလဲမှု့ကြောင့် ဖိုင်တင်တဲ့အခါမှာလည်း သူ့ပြောင်းလဲတာကို လိုက်ပြီး ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရှာပြီး နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် password နဲ့တင်ရပါတယ်. မဟုတ်ရင် တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး software ဟုတ်မဟုတ် စစ်မှာပါ။ များသောအားဖြင့် အဲ့ဖိုင်ကို တင်ထားတာ ဘယ်ဆိုက်မှာဆိုတာ သူတို့တန်းသိပါတယ်။ အဲ့တော့ ပထမဦးဆုံး သူတို့စမ်းမှာက ဆိုက်ရဲ့လိပ်စာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆိုက်လိပ်စာမထည့်ဘဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ မေးလ်လိပ်စာကို ထည့်လိုက်တာပါ။ ဒါလေးတောင် မရိုက်နိုင်ရင်လည်း ကျွန်တော်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ password ကတော့ ခံထားမြဲခံထားရမှာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတာ Download လုပ်တဲ့ဖိုင်ထဲမှာ မြန်မာလို ရေးပေးထားပါတယ်။ ကိုလိုချင်တဲ့ဖိုင်ရရင်ပြီးရော ဖတ်ပေးပါဆိုတဲ့ဖိုင်က မလိုပါဘူးကွာလို့ ဆိုပြီး ဖျက်ပစ်ရင်တော့ ဘာဖြစ်လို့ password ခံထားသလဲဆိုတာကို သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ရေးပေးပါ့မယ်။ ဂဏာန်း၊ ပုသင်ဝါးပင်၊ လိပ်မျိုးနွားသိုး၊ မြေခွေးဤ(6)ရေး၊ ကြီးသူမဖြစ်ထိုက်။ အဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဟာကို စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။ အဲ့ကဗျာထဲကလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရင်တည့်မတ်ပါ။ ဂဏာန်းလိုလည်း ကန့်လန့်မသွားပါနဲ့၊ ပုတ်သင်ညိုလိုလည်း ဘာပြောပြော အင်းချည်းပဲ ခေါင်းမညိမ့်ပါနဲ့၊ ၀ါးပင်လိုလည်း ဟိုလူကပြောရင် ဟိုလူ့ဖက်ကိုလိုက်လိုက်၊ ဒီလူပြောရင်လည်း ဒီဖက်ကိုယိမ်းလိုက် မလုပ်မိပါစေနဲ့၊ လိပ်တစ်ကောင်လိုလည်း ကို့ဖက်ကိုချည်း မယက်မိပါစေနဲ့၊ နွားသိုးတစ်ကောင်ကိုလည်း တဇွတ်ထိုး ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ ဇွတ်မမိုက်ပါနဲ့၊ မြေခွေးလိုလဲ ဒီဟာကို ရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားဥာဏ်နှင့်ချင့်ချိန်မှု့မရှိဘဲနဲ့ သေသေ၊ ရှင်ရှင် ဆိုပြီး မိုက်လုံး မကြီးမိပါစေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ အဲ့ခြောက်မျိုးထဲမှာ ပါနေတဲ့သူသည် ကြီးတဲ့သူ တစ်နည်းအားဖြင့် အများကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူ မဖြစ်ထိုက်တဲ့သူတွေပါပဲ။ အဲ့ဒီ့အထဲမှာ ကိုမပါမိပါစေနဲ့လို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားလျှက်ညီနေမင်း
မိမိကိုယ်ပိုင် laptop (or) Desktop ကို မိမိအခွင့်မရှိဘဲ ယူသုံးချင်တဲ့သူတွေဘာတွေ ရိုက်ပြီး မိမိကွန်ပျူတာမှာ ရှာခဲ့သလဲ။ ပြီးတော့ ဘာ software တွေ ကိုမသိတုန်း ခိုးတင်ထားခဲ့သလဲ။ မသိချင်ဘူးလား။ သိချင်ရင်တော့ အခု software ကို သုံးပြီးတင်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာတွေသုံးပြီး ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ မိမိကို ဘာတွေအကောက်ကြံဖို့လုပ်ခဲ့တယ်၊ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆို တာကို သိရမှာပါ။ သူငယ်ချင်းဆိုပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ မယုံလွယ်ပါနဲ့။ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်မှ မဟုတ်ရင် မယုံရပါဘူး။ နောက်ကြောကို ဓါးနဲ့ထိုးတတ်ပါတယ်။ ကဲသိချင်ရင် ၀ယ်ဖတ်ပါ။ Mediafire | Filecloud | Minus
* Easy handling (“one click”)* Adjustment of brightness, contrast etc.* Adding background music and effects* Simultaneous encoding of several videos* Upload videos to YouTube* Creation of videos in Facebook or MyVideo format* Touch screen support
Minus | Filecloud | Mediafire Read More
version လည်းထပ်မြင့်လာသလို လုပ်ဆောင်နိုင်မှု့လည်း များလာ ပါတယ်။ တောင်းထားတဲ့သူတွေ ရှိတဲ့အတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အမည်တွေနေတော့ လိုက်ရှာရမှာမို့ မထည့်တော့ပါဘူး။ ဖျက်ထားမိတဲ့ဖိုင်တွေ။ မေ့ပြီး format ချလိုက်မိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်ပြီး ရယူနိုင်သည့် application software ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က တင်ထားသော link များကိုလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ထပ်မံပြီးတော့ ပြုပြင်သွားပါ့မယ်။ ထပ်ဖြည့်သွားပေးပါ့မယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ Minus | Filecloud | Mediafire
တောင်းထားတာတွေ အားလုံးထဲက IDM ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အထဲမှာ patch ဖိုင်ပါပါတယ်. အခု patch က လွယ်ပါတယ်။ first name နဲ့ last name ပဲ တောင်းပါတယ်။ ကဲအားလုံးပဲ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်။ တောင်းထား တာတွေကိုတော့ Download လုပ်ထားပြီးပါပြီ. တင်ပေးဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ Download လုပ်ပြီးတာနှင့် ပထမဦးစွာ .rar ပြောင်းပြီး extract လုပ်ပါ. လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေးရင် ကျွန်တော်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။ ကိုညီနေမင်း@ဂျီမေးလ်ဒေါ့ကွန် နော်. အဲ့ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်ထည့်ရမှာ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်မှာပါ။ Mediafire | filecloud | Minus
တောင်းထားတာတွေ အားလုံးထဲက IDM ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အထဲမှာ patch ဖိုင်ပါပါတယ်. အခု patch က လွယ်ပါတယ်။ first name နဲ့ last name ပဲ တောင်းပါတယ်။ ကဲအားလုံးပဲ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်။ တောင်းထား တာတွေကိုတော့ Download လုပ်ထားပြီးပါပြီ. တင်ပေးဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ Mediafire | ifile | Minus